Ukuqapha kweglucose yegazi, ukuqapha isifo sikashukela, i-HbA1c analyzer, ukuqapha kwengcindezi yegazi-iSinocare
BHEKA KABANZI >>
I-Safe Accu BUKA OKUNINGI
I-Safe Accu2 BUKA OKUNINGI
I-Safe AQ Smart BUKA OKUNINGI
Ingelosi ephephile ye-AQ BUKA OKUNINGI
ISinocare inokuhlangenwe nakho kweminyaka engu-19 embonini ye-BGM kusukela yasungulwa ngo-2002, iyinkampani enkulu yokukhiqiza iBGM e-Asia kanye nenkampani yokuqala yokukhiqiza imitha yeglucose eChina, ezinikezela ekusungulweni kobuchwepheshe be-biosensor, ukuthuthukisa, ukukhiqiza nokumaketha ku imikhiqizo yokuhlola ukuxilongwa okusheshayo. Ngo-2016, ngemuva kokutholwa ngempumelelo kweNipro diagnostic Inc. (manje eseyaziwa ngeTrividia Health Inc.) nePTS Diagnostics Inc. ISinocare isibe ngumkhiqizi wamamitha amaningi eglucose egazini no-5 futhi enye yezinkampani ezihola phambili embonini ye-POCT embonini umhlaba.
Ilebhu Yokumiswa Kwe-iPOCT
Umqondo we-iPOCT standardization laboratory ukuhlinzeka ngohlelo olufanele lwelabhoratri ngomkhawulo ophansi kakhulu wezikhungo zezokwelapha eziyisisekelo ngokuphendula okusheshayo kokuthola, izidingo zesikhala esincane, nohlelo oluhlakaniphe kakhulu ...
I-SARS-Cov-2 Antigen Test Kit & Neutralizing Antibody Test Kit zivunyelwe Ukuthekelisa
Muva nje, iSinocare SARS-Cov-2 Antigen Test Kit ne-Neutralizing Antibody Test Kit zivunyelwe ukuthekelisa. I-China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products ishicilele Uhlu Lwezinkampani Zezinto Zokwelapha ...
Umcimbi Oqeda Isisekelo weSinocare iPOCT Industrial Park Project
NgoJanuwari 2021, umcimbi wokubekwa phansi kwesisekelo senqwaba yephrojekthi yeSinocare iPOCT Industrial Park wabanjelwa endaweni yephrojekthi. Le phrojekthi yipaki lezimboni elikhethekile le-iPOCT elakhiwe yiSinocare ngotshalomali lwe-RMB 1 billion. Kuyiplanne ...
Isisekelo sokuqala sikashukela
Xhasa uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1 futhi unikeze iziguli ezisanda kutholakala nge-'The Bag of Love 'ezibandakanya imanuwali yolwazi jikelele yesifo sikashukela njll.